जवान युवतीलाई घुरेर हेरेपछि ६० बर्षिय बृद्धका यस्तो हालत! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > जवान युवतीलाई घुरेर हेरेपछि ६० बर्षिय बृद्धका यस्तो हालत!
admin September 29, 2020 September 29, 2020 जीवनशैली, समाज	0
काठमाण्डौं । कानूनी ब्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा मानिसले गरेका सामान्य गल्ती अ प रा ध कायम हुने गरेको छ । नेपालका कानूनी ब्यवस्था अनुसार महिलामाथि कसैले खराब ब्यवहार गरेमा उ कारवाहीको भागिदार बन्ने गर्दछ । यस्तै कारवाहीको भागिदार सप्तरीमा चार जना हुने भएका छन् । उनीहरुलाई अनैतिक काम मुद् दा मा कै’द र जरिवाना हुने भएको हो ।
उनीहरु अदालतले कै’द र जरिवाना तोकेपछि फ रा र रहेका थिए । अहिले चारै जना सप्तरी प्रहरीको फ न्दा मा परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा डाक्नेश्वरी ४ का ७० वर्षीय बिन्देश्वर शर्मा, ६० वर्षीय खुशीलाल मण्डल, ३२ वर्षीय पवन पण्डित र रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ बस्ने ६० वर्षीय चन्दन लाल यादव छन् ।
चार वर्षअघि जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । फैसला अनुसार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन कै द तोकिएको थियो । मु द्दा मा यी चारै जनालाई जिल्ला अदालतले २०७४ साल असार २१ गते १० दिन कैद र ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने आदेश दिएको अदालतले जानकारी दिएको छ ।
कै द तथा जरिवानाको फैसला सुनाइएपछि उनीहरु फ रा र भएका थिए । अहिले चारै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र धमलाले बताए ।
अमिताभ बच्चनकाे कोरोना टेस्टकाे रिपोर्ट यस्तो आयो!